Ig Nobel Prize: Qorannoon warseessa garagalchanii fannisan Badhaasa Noobeelii qoosaa mo’ate – AMBO TV
Qorannoon warseessa (rhino) gadi garagalchanii fannisuun dhiibbaa akkamii akka isaan irraan gahu ilaaluuf itti yaalan, badhaasa Noobeelii Ig baranaa keessaa tokko mo’ate.
Badhaasonni kaanis qorannoo baakteeriyaa maastikaa alanfatan lafarra maxxane keessa jiru, akkasumas qorannoo ilbisoota doonii bishaan jala deemu (submarine) irratti taasifameef kennaman.
Badhaasni kan qoosaati jedhaman kunniin, akka badhaasa Noobeelii isa kaanitti beekamaa miti.
Sagantaan badhaasa kanaa bakka barame Yunivarsiitii Harvaard Ameerikaa jiru keessa sababa weerara Koronaan raawwachuu dhabus, gama onlaayiniin gaggeeffame.
Barruun qoosaa saayinsii Annals of Improbable Research jedhamuufi badhaasa IgcNobel qopheessu akka jedhutti, badhaasni kun jalqabarra si kolfisiisa, boodarra garuu akka yaaddu si taasisa jedha.
Qo’annoon warseessarra taasifameefi badhaasa gama qorannoo geejibaan injifate kunis kana waan milkeesse fakkaata. Warseessa 12 daqiiqaa 10f gadi garagalchanii fannisuu caalaa maaltu gowwummaa fakkaata?
Ogeessi fayyaa bineensotaa Robin Radcliffe fi waahillan isaanii Naamibiyaatti kanuma godhan. Fayyaan bineensota kanaa yoo gadi garagalchan dhiibbaa akkamiiti irraan gaha kan jedhu baruu barbaadan.
Hojii eegumsa warseessaa Afrikaa keessatti bineensota kanniin helikooptaraan bakkaa bakkatti sochosuuf mala kanaan gargaaramu.
Haa tahu malee, namni kamiyyuu bineensoti kunneen wayita qorichaan waraanamanii of wallaalanitti, gadi garagalanii wayita balaliifaman, onneefi sombi isaanii maal keessa dabra kan jedhu kan qo’ate hinjiru jedha Robin.
Ogeessi kun BBCtti akka himetti: ”Naamibiyaan biyya jalqabaa kan gochuuf hayyamamaa taateedha. ‘Kuni warseessotaarra balaa hin geessisuu?’ jedhanii gaafachuun fedhii qaban agarsiisan,” jedhe.
Achis isaafi waahillan isaa Ministeera Naannoo, Bosonaa fi Turizimii wajjin tahuun, warseessota 12 qorichaan waraanuun erga hadoochanii booda, kireeniin miila xaxanii ol fannisan. Hordoffii fayyaas taasisanif.
Qorannoon kunis waan dassaa argate. Inumaayyuu bineensonni kun wayita achii gadi garagalanii fannifamanitti, isa lapheen ciisaniifi maddiin cisan caalaa deebii gaarii agarsiisaniiru jedha qorannoon kun.
Akkuma aadaa badhaasa Ig Noobeeliin kanneen mo’ataniif badhaasicha kan kennan namoota badhaasa Noobeelii isa dhugaa injifatan yookaan looreetiwwan Noobeeliini.
Mo’attoonnis waancaa/geeba mo’atan waraqata PDFn ergameef maxxansuun walitti tolchuun ture. Akkasumas kennaan ‘maallaqaa’ isaan mo’tanis, nootii sobaa maallaqa Zimbaabwee doolaara tiriliyoona 10 ture
Previous PostAfghanistan: Journalists tell of beatings by Taliban
Next PostMet Gala 2021 Best Dressed Celebrities on the Red Carpet